Waa maxay sababta Cyber365?
Chris Ward waa khabiir khibrad u leh amniga amniga internetka oo u fidiya tababarro tayo sare leh iyo la-talinta amniga internetka shirkadaha, ururada iyo aqoonta jaamacadeed. Hadda lamaane lagu kalsoon yahay oo la leh Jaamacadda Carnegie Mellon wuxuu ku bixinayaa koorsooyin tayo sare leh Australia, New Zealand, Fiji, iyo America. Kahor aasaasida shirkad isaga u gaar ah, wuxuu ahaa hogaamiyaha Ciidamada Difaaca ee New Zealand amniga Cyber Security iyo Information Security. Chris wuxuu kaloo gudoomiye ka ahaa laba guddi fulineed oo caalami ah. Chris wuxuu u wareegay NZDF isagoo ka soo wareegay Agaasinka Amniga ee Wasaaradda Difaaca UK. Chris wuxuu kaloo ahaa la taliye sare oo ka socda UK MOD ilaa NATO CERT.
Chris wuxuu abuuray oo maareeyay Kooxaha Kajawaabista Dhacdooyinka Amniga Kumbuyuutarka (CSIRT's) ee UK iyo NZ. Wuxuu sidoo kale macallin ka yahay Machadka injineernimada softiweerka (SEI) ee Jaamacadda Carnegie Mellon oo fadhigeedu yahay Mareykanka wuxuuna bixiyaa tababarka SEI ee New Zealand iyo Australia iyadoo lala kaashanayo Jaamacadda Victoria ee Wellington.
Chris wuxuu dhowaan qoray oo muxaadaro ka qaatay diblooma diblooma ah ee shahaadada amniga ee jaamacadda South Pacific ee Fiji.
Chris hadda waa Agaasimaha Maamulka iyo aasaasaha Cyber365.
Wuxuu yidhi, "aragtidiisu waa inuu bixiyo tababaro, qalab, iyo aqoon si loo gaadhsiiyo awood gudaha ah iyo nabadgelyada ururada."
Cyber365 wuxuu ka dhashay ogaanshaha in ururada ka jira guud ahaan Aasiya Baasifig ay la daalaa dhacayaan caqabado la mid ah xagga warshadaha oo la xiriira Amniga Internetka iyo habka ugu wanaagsan ee caqabadahaas madaxa loogala kulmi karo.
Waxa maanta u muuqda shirkadaha waa iyada oo aan waxba la qaban jawaabta hadda ka dib. Waa inay ilaashadaan hantidooda ganacsi, hantidooda aqooneed, iyo macaamiishooda haddii ay tahay inay ku sii negaadaan meherada ayna ilaaliyaan kalsoonida iyo kalsoonida macaamiishooda.
Natiija ahaan, Cyber365 waxay abuurtay qaab ganacsi oo udub dhexaad u ah iyada oo ujeedada kaliya ee la shaqeynta ururada si loo gaaro loona ilaaliyo kaabayaasha adkaysiga leh ee Cyber Security iyadoo la adeegsanayo saddexda qaybood ee soo socda ee Cyber365 ee hawlgelinta;
Qiimeynta Khatarta Wadatashiga
Tababbarka Gaarka ah ee Macaamiisha
Ku lug lahaanshaha Cyber365, ururadu hadda waxay heli karaan la-talin iyo tababar ku habboon si loo hubiyo 'habka ugu fiican' tallaabooyinka Amniga Internetka ee loo diyaariyey in laga ilaaliyo dhacdooyinka lama filaan ah ama ula kac ah falalka sharci darrada ah.
Waxaan kaa soo aruurineynaa macluumaadka shakhsiyeed, oo ay ku jiraan macluumaadka ku saabsan:
biilasha ama iibsiga macluumaadka
Waxaan u ururinaa macluumaadkaaga shakhsiyeed:
hesho lacag bixin oo lagaa diiwaan geliyo koorso.
Waxaan ku ilaalineynaa macluumaadkaaga mid aamin ah anagoo ku keydinayna feylallo sir ah isla markaana kaliya u ogolaanayno shaqaalaha qaarkood inay helaan.
Waxaad xaq u leedahay inaad weydiisato nuqul ka mid ah macluumaadka shaqsiyeed ee aan kaa hayno adiga oo aad weydiisato in la saxo haddii aad u aragto inay khalad tahay.
Haddii aad jeclaan lahayd inaad weydiisato nuqul ka mid ah macluumaadkaaga ama in la saxo, fadlan nagala soo xiriir contact@cyber365.co